Wiil uu adeer u yahay Madaxweynaha Soomaaliya oo saaka lagu dilay Muqdisho
Shaqaale u shaqeynaayay hay'adda samafalka Turkiga ee TIKA oo Muqdisho lagu dilay
Sagal Radio Services • News Report • April 15, 2013
Laba ka mid ah shaqaalaha samafalka dalka Turkiga ee jooga Muqdisho, ayaa ku dhintey, tiro intaa la egna way dhaawacmeen, kadib markii gaari ay la socdeen shaqaalahasi lagu qarxiyay gaari kale oo walxaha qarxa laga soo buuxshay shalay Axaddii.
Gabar u shaqeyneysay laanta socdaalka oo saaka Xamar lagu dilay
Sagal Radio Services • News Report • March 23, 2013
Kooxo hubaysan ayaa saaka dil toogasho ah u gaystay gabar magaceeda lagu soo koobay Zaynab oo ka tirsanayd shaqaalaha garoonka diyaaaradaha ee Aadan Cabdulle, gaar ahaan Laanta Socdaalka dowladda Soomaaliya.
Dad xalay lagu dilay Gaalkacyo
Sagal Radio Services • News Report • February 19, 2013
Wararka ka imaanaya magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug ayaa sheegaya in xalay fiidkii halkaas lagu dilay labo qof oo rayid ahaa, qof kalena lagu dhaawacay.
Dablay Nabaddoon ku dishay Galgaduud
Sagal Radio Services • News Report • February 18, 2013
Kooxo hubeysan, ayaa saaka barkhadii deegaanka Ceel Cali Mire oo 15 KM u jira degmada Dhuusa-Marreeb ee xarrunta gobolka Galgaduud ku dilay nin nabaddoon ahaa, oo deegaankaasi si weyn looga yaqiin, sida ay dad deegaanka ahi ku warameen.
Shabaab oo sheegatay inay dishay la heyste Kenyaan ah, kuwa kalena ku hanjabtay inay dilayaan
Sagal Radio Services • News Report • February 15, 2013
Al-shabaab ayaa war ay soo saartay ku sheegtay in xalay saqdii dhexe ay xukun dil ah ku fulisay mid ka mid ah dad Kenyan ah oo ay gacanta ku hayso, kaasoo ay ku sheegeen inuu ahaa askari ka tisranaa ciidamada Kenya ee ku sugan gudaha Soomaaliya.
Dabley ganacsade xalay ku dishay Kismaayo
Kooxo hubeysan, ayaa xalay magaalada Kismaayo ku dishay mid ka mid ahaa ganacsatadii magaalada Kismaayo ku dhaqnaa, iyadoo kooxihii dilka geystayna la sheegay iney baxsadeen.
Wariye Muqdisho lagu dilay
Sagal Radio Services • Audio • January 18, 2013
Allaha u naxariistee weriye Cabdi Xareed Cismaan Adan oo ka mid ahaa weriyaasha ka howlgala idaacada Shabelle ee magaalada Muqdisho ayaa saaka kooxo hubeysan waxa ay ku dileen magaalada Muqdisho.
Sarkaal ka tirsan booliska Garoowe oo xalay la dilay
Nin baastoolad ku hubeysan, ayaa la sheegay in uu xalay gudaha degmada Garoowe ee caasimadda maamul goboleedka Puntland ku dilay sarkaal ka tirsanaa ciidamada booliska Puntland.
Guddoomiyihii ganacsatada Bakaaraha oo la dilay
ALLAHA u raxmadee waxa saaka magaalada Muqdisho gaar ahaan suuqa Bakaaraha lagu dilay guddoomiyihii ganacsatada Bakaaraha Axmed Nuure Awdiini.
Askar lagu eedeynaayo dilka rayid oo Baladweyne lagu xiray
Sagal Radio Services • News Report • November 10, 2012
Ciidamada dowladda Soomaaliya ee gobolka Hiiraan, ayaa gacanta ku soo dhigay seddex ruux oo lagu eedeynaayo dil bishii October Baladweyne looga geystay mid ka mid ah dadka degmada Gaalkacyo ku dhaqnaa oo Baladweyne u yimid arrimo dacwo.
Shaqaale ka mid ahaa kuwa ka xamaasha dekadda Kismaayo oo xalay la dilay
News Report • November 6, 2012
Maamulka dekadda Kismaayo, ayaa ku eedeyay kooxda al-Shabab inay ka dambeyso dil xalay magaalada Kismayo loogu geystay mid ka mid ah shaqaalaha dekadda magaalada Kismaayo.
Matabaan oo 3 ruux lagu dilay
Sagal Radio Services • News Report • October 27, 2012
Kooxo dabley ah, ayaa shalay galinkii dambe tuulada Oomane oo ka tirsan degmada Matabaan ee gobolka Hiiraan ku diley seddex ruux oo ka mid ahaa dadka deegaankaasi ku dhaqan, kuwaas oo la sheegayo in loo dilay sababo aano qabiil.
Warbixin ku aaddan dilkii Dr. Shiikh Axmed Xaaji Cabdiraxmaan
Sagal Radio Services • News Report • October 24, 2012
Nabaddoon caan ah oo xalay Kismaayo lagu dilay
Sagal Radio Services • October 19, 2012
Kooxo dabley ah ayaa xalay ku toogtay gudaha magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubbada Hoose nabaddoon si weyn looga yaqaan degmadaas oo lagu magacaabi jiray, Xasan Sheekh kaddib markii ay kooxdu ku weerartay afaafka hore ee gurigiisa.